Musharaxiinta Madaxweynaha oo Caawa ku baaqay Shir Deg deg ah oo Farmaajo… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Midowga Murashaxiinta Soomaaliya ayaa walaac xoog leh looga muujiyey jahawareerka iyo hubanti la’aanta xaaladda kala guurka ah ee siyaasadda dalka.
Golaha ayaa qoraalkan ku sheegay inuu ka walwalsan yahay in muddo xileedkii hay’adaha Dastuuriga ah uu idlaaday, iyadoo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbo xilligan kala guurka ah.
Sidoo kale war-saxaafadeedkan caawa ka soo baxay Golaha Midowga Murashaxiinta waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu hadda kadib yahay musharax iyaga lamid ah, shirka la qaban doonana uu ka soo qeyb galo, isagoo shakhsi ah, waa hadii uu yahay musharax.
“Goluhu wuxuu caddaynayaa in mudane Maxamad C/Ilaahi Farmaajo uu yahay madaxweyne muddo xileedkiisii dhammaaday, shirkana uu kaga soo qaybgeli karo oo keli ah murashax la mid ah murashaxiinta kale ee u taagan xilka Madaxweynimo, haddii uusan tartanka ka tanaasulin,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Ugu dambeyntii Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa ku baaqay in la dhowro sharciga iyo kala dambeynta oo aan madax mudo xileedkii ka dhamaaday aan shacabka lagu sii dul heyn.